ओलीसँग कस्तो सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् मोदी ? | My News Nepal
ओलीसँग कस्तो सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् मोदी ?
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश लिएर काठमाडौं आउँदै छिन् । वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्वराजको भ्रमणका विषयमा विभिन्न अड्कालबाजी सुरु भएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज आकस्मिकरुपमा नेपाल भ्रमणमा किन आउन लागेकी हुन् भनेर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौं आएर स्वराज राजनीतिक भेटवार्ता गरेर शुक्रबार नयाँ दिल्ली फिर्ता हुने छिन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतले नेपाललाई स्थायी सरकार बन्ने भएकोले विशेष महत्व दिएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो–एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एक महिनामा दुई पटक फोन गर्नु र बधाई दिनु ।
एमालेका नेताहरू विशेष गरेर केपी ओली भारतसँग पहिलाकै जस्तो गरेर नयाँ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी अतुर छन् । दुई दिने काठमाडौं बसाईका क्रममा उनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाईसकेको छ । नयाँ सरकार बन्न लागेका बेला हुन लागेको विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले द्विपक्षीय भेटघाटको परम्पराको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा यस्तो भ्रमणले द्विपक्षीय सहकार्यलाई बृद्धि गर्नुका साथै सम्बन्धका विविध क्षेत्रलाई अरु बलियो बनाउने उसले बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो व्याख्या गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यो भ्रमणलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छैनन् । मोदीले नेपाललाई आर्थिक रुपमा समृद्ध भएको हेर्न चाहेका छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । सोही अनुरुप मोदीले नेपालमा वाम गठबन्धनको पाँच वर्षको लागि सरकार बन्ने निश्चित भएकोले मोदीले विकास साझेदारमा काम गर्न चाहेका छन् । वाम गठबन्धनको दब्दवा रहेका बेला नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन लागेका छन् । स्वराजले मोदीको विशेष सन्देश बोकेर आउने भारतीय उच्च अधिकारीको दाबी छ ।